IRosari yokukhulisa umntwana kaThixo Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukuba ufikelele kweli nqaku kungenxa yokuba unomdla wokwazi ngalo IRosari yokukhulisa uMntwana onguThixo. Ukuzinikela okubiza iimfihlakalo ezinxulumene nobuntwana bukaYesu.
1 Okomoya kwiRosari ukukhulisa uMntwana kaThixo
3 Usebenzisela ntoni?
4 Kwenziwa njani?
6 Kufuneka yenziwe nini?
Okomoya kwiRosari ukukhulisa uMntwana kaThixo
Le rosari yenye yeenguqulelo ezenziwe ukwenzela ukunika ububanzi kwiimfihlakalo zikaYesu. Phakathi kwazo yenye yezona zinto zintle njengoko enjalo ngoyolo; Le mfihlakalo ithathela ingqalelo ezinye zezenzo zeNkosi yethu uYesu Kristu xa wayesemncinci nje, kunye nezenzo zeNtombi Enyulu ngaphambi kokumitha umntwana onguThixo.
Abo bayaziyo i Ingcwele yeRosari bayazi malunga neemfihlakalo ezi-4. Ezi zicamngca ngeziganeko ezinxulumene neentsuku zokuqala zikaYesu emhlabeni kunye nokungcwaliswa nokubekwa etroneni kukanina kaThixo; Ubume beli rosari bufana kakhulu nerosari yeklasi enokwahluka nje okumbalwa.
Esi sakhiwo sivumela amakholwa ukuba acamngce ngeemeko ezinxulumene nothixo womntwana. Yiyo loo nto kugxilwe kunxulumene neemfihlakalo zovuyo; Ngale ndlela, ezinye iziqulatho zinomdla omkhulu kungekuphela nje ngokwazi nzulu ngezi meko, kodwa ukwandisa ukholo kuzuko lweNkosi yethu.
Umntwana olahlekileyo wafunyanwa etempileni, utyelelo lwentombi enyulu kumzala wakhe uElizabhete, bobabini beziimfihlakalo zovuyo kwaye ezifumaneka kwiivesi ezininzi zeBhayibhile: nganye iphathwa ngendlela efanayo kunye nolwakhiwo njengoko ziqhutywa ngaphandle irosari iklasikhi.
Ezi ntlobo zeerosari zizicelo kunye neendumiso ezenziwa ngamakholwa kunye nabameli becawa ukugcina unikezelo lokomoya kuThixo. Ngamanye amaxesha, abathembekileyo bahlala beyisebenzisa xa benesicelo esithile esimalunga nesifo, okanye ukucela uncedo kwingxaki ethile.
Nangona ayiyiyo irosari ethandwa kakhulu, abantu abamaziyo banokholo olukhulu kwimimangaliso yakhe. Njengawo wonke umthandazo nomthandazo, icandelo ngalinye kufuneka lenziwe ngoxinzelelo olukhulu; Ngokunjalo, iimfihlakalo kufuneka zenziwe phantsi kwenqanaba eliphezulu loxinzelelo.
Njengazo zonke iirosari zakudala, iqala ngomthandazo onxulumene nomntwana onguThixo, emva koko kuthiwe uBawo Wethu kwaye kuthathwe irosari. Kwaoko kuqala ukubalwa kweepesenti ezilishumi apho kuthiwe ii-10 zikaMariya noGloria.
Xa uqala ngentambo, ukucamngca ngemfihlelo yokuqala yovuyo kuyenziwa, okusoloko kunxulunyaniswa nokuzalwa. Siyazi kakuhle ngalo mzuzu apho ukufika kukaMesiya kubhengezwa ngoJohane uMbhaptizi; mva umthandazo uyenziwa kwaye ulandelelwano olufanayo luyaqhubeka.
Imfihlelo yesibini ijolise kutyelelo lweNtombi enyulu kumzala wayo uSanta Isabel, emva kokwenza i-10 Isichotho uMariya kunye neGloria. Njalo ngaphambi kokuqala ukukhankanywa kwemfihlakalo kubalulekile ukucamngca imizuzwana embalwa kwaye uqhubeke.
Ukulandelelana komthandazo, ukucamngca, uMthandazo weNkosi, ii-10 zikaMariya noZuko kuyagcinwa, ukungena kwimfihlakalo yesithathu ejongene nokuzalwa komntwana uThixo. Kwibhayibhile sifumana iivesi ezininzi ezichaza loo mzuzu ubalulekileyo eluntwini.
Imfihlakalo yesine yenziwa ngokukhankanywa kokuhlanjululwa kwentombi enyulu, inqanaba apho umama weNkosi alungele ukuya ezulwini. Kumakholwa ngumzuzu okhetheke kakhulu wovuyo; apho intombi iyaziswa kwaye ilungiselelwe ukuba kamva imse kwinqanaba eliphezulu lokomoya.
Kwangokunjalo, kuthandazwa uBawo wethu Osezulwini, oo-10 ooMariya noGloria, ukuba bangene kwimfihlakalo yesihlanu neyokugqibela yerosari ukukhulisa umntwana uThixo. Kule meko sinomntwana olahlekileyo kwaye wafunyanwa etempileni; Lixesha apho uloyiko lubamba abazali, kodwa ubulumko bukaYesu esemncinci buyatyhilwa.
Kufuneka yenziwe nini?
Ngaphambili besikhe sayitsho ukuba yayisetyenziswa ngabathembekileyo ngexesha lokuveza ubunzima okanye ingxaki. Kubalulekile ukuhlonipha iikhrayitheriya ezinxulumene nomhla ekucetyiswa ukuba wenziwe ngawo; Kwaye icawe icebisa ukuba kuthandazwe ngokuthe ngqo iintsuku ezabelwe iimfihlakalo zovuyo; Zasekwa ngoMvulo nangoMgqibelo. Ukugqiba, i-litany yenziwa kwaye kamva umthandazo wokugqibela, onokuthi ufane noku kulandelayo:
Owu, uYesu oyiNgcwele, ogcwalisa izulu nomhlaba ngabo bonke ubuqaqawuli bakho, wena obufuna ukuhamba uye kwindawo engaziwayo kwaye uzame ukufihla ubukhulu bakho kwisitali esithobekileyo. Siyakucela ngentliziyo ukuba izivamvo zam emzimbeni nasemphefumlweni zikudumise kwaye ndingaphila ndibulela uthando lwakho.
Olo thando ulwenzileyo ukuba ulunike xa waba yindoda yokusindisa bonke abantu, egcwele usizi olubi kunye nesidalwa esingafanelekanga. Ndiyakucela, mama, ukuba ukhulise uthando ngonyana wakho oyingcwele ukuze ahlale ebeka uYesu wam olungileyo entliziyweni yam. Amen.
Ngendlela efanayo, abanye abantu banokwenza iingoma zerosari ezinje ngo "Silent Night", "Bell over bell", "Masihambe abelusi, masihambe" kwaye ezinye zeekrisimesi ezifana "neBhetelehem yaseBhetelehem", zihlala zinxulumene nokuzalwa kunye nobuntwana zikaYesu.
Akukho namnye othembekileyo ecaweni ongamele azithande iirosari ezikhoyo kuzo zonke iinkonzo, sifuna ukukhumbula ukuba nganye ayisekelwanga ukukholisa iminqweno yomfundisi othile okanye yomntu othile.
Kukwabalulekile ukwazi ukuba izikhombisi ezinikezwe kweli nqaku sisikhokelo esinokuqiniswa neengcebiso ezinokucelwa kwiicawa nakwiitempile ezikufutshane. Thetha kwaye ucele ulwazi olongezelelekileyo kunye nabo baphetheyo kunye neengcali zale rosari.
Ukuba uluthandile olu lwazi, singavuya kakhulu xa usishiya nezimvo zakho. Kwakhona, ungalibali ukwabelana ngalo mxholo kunye nabahlobo bakho kwiinethiwekhi zentlalo; Siyakukhuthaza ukuba ufunde inqaku elilandelayo Umthandazo wokukhulisa umntwana uThixo apho ungongeza khona ulwazi olunikiweyo.